Taorian'ny 20 taona nanaovana fanadihadiana FBI dia ofisialy io: Arabia Saodita Tsy meloka tamin'ny 11 septambra Fanohanana fampihorohoroana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Taorian'ny 20 taona nanaovana fanadihadiana FBI dia ofisialy io: Arabia Saodita Tsy meloka tamin'ny 11 septambra Fanohanana nataon'ny fampihorohoroana
Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Taorian'ny 20 taona nanaovana fanadihadiana FBI dia ofisialy io: Arabia Saodita Tsy meloka tamin'ny 11 septambra Fanohanana nataon'ny fampihorohoroana
Septambra 12, 2021
Ny filoham-pirenena amerikana Biden dia nisedra tsindry nandritra ny herinandro lasa izay avy amin'ny fianakavian'ireo niharam-boina, izay efa nitady ny firaketana an-tsoratra nandritra ny fanenjehana azy ireo tany New York tamin'ny filazàna fa tompon'andraikitra ambony amin'ny fanafihana ireo tompon'andraikitra ambony Saodiana.
Ny 12 septambra 2021 dia mety ho andro tsara ho an'ny fizahan-tany manerantany. Ny sabotsy 12 septambra 2021 faramparan'ny, namoaka antontan-taratasy vao voasokajy ny FBI mikasika ny fanafihana fampihorohoroana tamin'ny 11 septambra 2001 tany Etazonia.
Ny antontan-taratasy dia mamaritra ny fifandraisan'ireo mpaka an-keriny tamina mpiara-miasa saodiana any Etazonia saingy tsy manome porofo akory fa mpiray tsikombakomba ny governemanta Saodiana tamin'io tetika io.
Ny FBI dia namoaka antontan-taratasy 16 pejy vao nohavaozina mifandraika amin'ny fanohanana ara-logistika nomena ny roa tamin'ireo mpaka an-keriny Saodiana taorian'ny fanafihana ny 11 septambra 2001.
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany koa dia niandry ny famoahana ity tatitra FBI ity mba hanazavana azy ireo raha toa ny governemanta Saudi Arabia manohana ireo mpanararaotra sy mpampihorohoro tamin'ny 11 septambra 2001.
Ny antony: fanohanana vao haingana ny Saodita Arabias ary nanome fitarihana ho an'ny fizahan-tany manerantany.
Mpijanona mangina amin'ny fanohanana sy ny fahazoana Fikasan'i Saudi Arabia ho an'ny fanohanany tena ilaina amin'ny fizahan-tany amin'ny fotoana tsy afaka mandalo COVID-19 pendemika dia nahitana rahona fahakiviana. Nandeha mafy hatrany ny fisalasalana isan’andro izay nitondra ny tsingerintaona faha-20 ny fampihorohoroana ny 11 septambra.
Tamin'io lafiny io ihany rehefa nahatadidy olona 20 tapitrisa teto amin'izao tontolo izao 11 taona taorian'ny XNUMX septambra lasa teo, ny filoha amerikana Biden dia nanisy tombo-kase toko farany momba an'io famoahana dokambarotra FBI momba ny asan'ny Saudi Arabia io - raha misy izany.
Ny 12 septambra taorian'ny 11 septambra 2001 dia andro iray niraisan'ny firaisankina tany Etazonia sy ny tontolo sivily
Niova ho an'i Etazonia izao tontolo izao tamin'ny 12,2001 septambra 12 tamin'ny fampivondronana ny firenena sy izao tontolo izao tamin'ny 11 septambra, ny ampitson'ny XNUMX septambra.
Nampahatsiahivina ny Amerikanina androany fa tsy maintsy hijoro indray i Amerika. Etazonia dia nanandrana ny hatsaran'ny firenena raha nahita fomba hiray hina indray ny olona.
Ny famoahana ireo antontan-taratasy FBI dia tsy dingana iraisam-pirenena marani-tsaina fotsiny, fa dingana iray lehibe amin'ny fizotran'ny fanasitranana eto an-toerana.
Marihina, 20 taona lasa izay, ny Taliban dia nanao antso avo tany Etazonia mba tsy hanafika an'i Afghanistan. Ny tsy fisian'ny vahaolana diplomatika dia niteraka ady 20 taona, ary ny tahotra ny fampihorohoroana ankehitriny.
Ny antontan-taratasy fanadihadiana FBI navoaka ny harivan'iny 11,2021 septambra XNUMX, dia mamaritra ny fifandraisan'ireo mpaka an-keriny tamina mpiara-miasa saodiana any Etazonia fa tsy manome porofo akory fa mpiray tsikombakomba ny governemanta Saodiana tamin'io tetika io.
Io no rakitsoratra fanadihadiana voalohany naseho hatramin'ny nandidian'ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden ny hanaovana famerenana ireo fitaovana izay efa an-taonany maro no tsy hitan'ny besinimaro.
Efa ela ny governemanta Saodiana no nandà ny fandraisana anjara amin'izany. Ny masoivoho saodiana any Washington dia nilaza tamin'ny Alarobia fa nanohana ny fanambaràna tanteraka ny firaketana rehetra ho fomba iray "hamaranana ireo fiampangana tsy misy fotony momba ny Fanjakana indray mandeha".
Nilaza ny masoivoho fa ny fiampangana rehetra fa mpiray tsikombakomba amin'i Arabia Saodita dia "diso avy amin'ny sokajy".
Nolavin'ny governemanta Saodiana ny fandefasana vola tamin'ny roa tamin'ireo mpaka an-keriny 11 septambra, Khalid al-Mihdhar, lasa ary Nawaf al-Hazmi
Ny filoha amerikana Biden tamin'ny herinandro lasa teo dia nanome baiko ny Departemantan'ny Fitsarana sy ireo masoivoho hafa mba hanao famerenana amin'ny laoniny ireo antontan-taratasy fanadihadiana ary hamoaka izay azon'izy ireo mandritra ny enim-bolana manaraka.
Navoaka tamin'ny sabotsy alina ny pejy 16, ora maro taorian'ny nanatrehan'i Biden hetsika fahatsiarovana 11 septambra tany New York, Pennsylvania, ary avaratr'i Virginia. Ireo havan'ireo niharam-boina dia nanohitra ny fanatrehan'i Biden talohan'ireo hetsika ara-pivavahana raha mbola tsy voasokajy ireo antontan-taratasy.
Ilay firaketana nihena be izay navoaka tamin'ny sabotsy dia mamaritra ny resadresaka nifanaovana tamina olona 2015 izay nilatsaka ho zom-pirenena amerikana ary taona maro talohan'izay dia nifandray tamina teratany saodiana izay nilaza fa "fanohanana ara-pitaovana lehibe" ho an'ireo mpanao an-keriny maro.
Ny fitantanan-draharaha Biden tamin'ny volana febroary dia namoaka fanombanana ara-pitsikilovana nahatafiditra ny printsy satro Mohammed bin Salman tamin'ny famonoana ny mpanao gazety monina any Etazonia Jamal Khashoggi tamin'ny taona 2018 saingy niteraka tsikera avy amin'ny Demokraty tamin'ny fisorohana ny sazy mivantana an'ilay printsy satro-boninahitra.
Mikasika ny 11 septambra lasa teo, dia nisy ny tombana ny amin'ny fandraisana andraikitra ofisialy hatramin'ny fotoana fohy taorian'ny fanafihana, rehefa fantatra fa 15 amin'ireo 19 nanafika no Saodiana. Osama bin Laden, mpitarika ny al-Qaida tamin'izany fotoana izany, dia avy amin'ny fianakaviana malaza ao amin'ny fanjakana.
Nanadihady ny diplaomaty Saodita sasany i Etazonia ary ny sasany manana ny fifamatoran'ny governemanta Saodiana izay nahafantatra ireo mpaka an-keriny taorian'ny nahatongavan'izy ireo tany Etazonia, araka ny antonta-taratasy izay efa nohazavaina.
Na izany aza, ny tatitra nataon'ny Vaomiera 9/11 dia nahita “tsy misy porofo fa ny governemanta Saodiana amin'ny maha andrim-panjakana na tompon'andraikitra ambony Saodiana dia mamatsy vola tsirairay”Ireo fanafihana ati-doha nataon'i al-Qaeda. Saingy nanamarika ihany koa ny komisiona fa "ny mety" nataon'ny fikambanana mpanao asa soa tohanan'ny governemanta Saodiana.
Ny fanaraha-maso manokana dia mifantoka amin'ireo mpaka an-keriny roa voalohany tonga tany Etazonia, Nawaf al-Hazmi ary Khalid al-Mihdhar. Tamin'ny volana febroary 2000, fotoana fohy taorian'ny nahatongavan'izy ireo tany atsimon'i California dia nifanena tamina trano fisakafoanana halal ny teratany Saodiana iray antsoina hoe Omar al-Bayoumi izay nanampy azy ireo hahita sy nanofa trano tao San Diego, nifandray tamin'ny governemanta Saodiana ary nahasarika ny fanadihadian'ny FBI teo aloha .
Famerenana amin'ny laoniny ny lalàna amerikana nankatoavin'ny Senatera amerikana
Tsara be ho an'i Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Volotea ...
Fitoviana amin'ny fahazoana vaksiny miaraka amin'ireo maherifo amin'ny fizahantany manerantany ...
Jery ​​World Network Network momba ny fizahan-tany sy ny fampihorohoroana
Drone Vaovao afaka mampiakatra 200 kg ary manidina 40 km
Fitsidihana voafetra mankany Hawaii mandritra ny 2 volana fanampiny
Halaviro ny ahiahy amin'ny divay. Mifalia sy misotroa Bordeaux Les ...
An-jatony maro no voaroaka avy amin'ny doro tanety Sardinia wild ...
Lufthansa Value dia hitombo eo anelanelan'ny $ 2.5 ...
Fanampin'ny fahafaha-manao amin'ny Prime Editing Platform ...
Qatar Airways sy RwandAir dia nanambara ny fifanarahana fifanatonana
WTN dia manana fanontaniana fiarovana vaovao ho an'ny tsenan'ny fitsangatsanganana eran-tany ...
Kenya dia mamarana ny fe-potoana naharitry ny COVID-19 tamin'ny takarivan'ny andro
Hawaii Airlines nifindra tany Tom Bradley International ...
Farafahakeliny 21 no maty, am-polony tsy hita tao amin'ny sambo Bangladesh ...
Ny filoha teo aloha Afghanistan dia mipetraka any UAE miaraka amin'ny $ 169 ...
South Africa Airways dia nanambara ny Executive Interim vaovao
Venice izao dia mandoa vola amin'ny mpizahatany
Ny faritra NYPD dia misy faritra manodidina ny tranobe UN ...
Aza manao 'maska ​​diso' amin'ny Eurostar ...
Viking Cruises: inona no vaovao?
Alles über alles: fivarotana ao amin'ny Hesse any Alemana ...
American Airlines hanao codeshare miaraka amin'ny IndiGo any India ...
Miisa ambany ho an'ny NASA SpaceX Crew-3 Lift Off
Fitsangatsanganana amerikana: nanokatra indray fanapahan-kevitra hendry i Angletera
Kanseran'ny nono voalohany: Ahoana no hanampian'ny Verzenio?